မရေးဘူးမဖတ်ဘူးဆိုပေမယ့် မနေနိုင်ဘူး။ အိမ်မှာရှိတဲ့AccessKitလေးနဲ့ ဟိုဟိုဒီဒီ
ယောင်တောင်တောင်နဲ့ရောက်ခဲ့ပြန်ရော။ ရန်ကုန်မှာ အားလပ်ရက်တွေ အိပ်အိပ်စားစား
မောင်ဒီးမနေတတ်မထိုင်တတ်နဲ့။ (အားလပ်ရက်မတိုင်မီက မောင်ဒီးက မြန်မာပြည်မှာ
ဒီကနေ့ MICT Park သို့မဟုတ် Myanmar Info-Tech ကို မောင်ဒီးရောက်သွားတယ်။
Project ပြိုင်ပွဲဆိုလား ဈေးရောင်းပွဲဆိုလား အတော်လူစည်တာဘဲ။
ကျောင်းစိမ်းလေးတွေ လာပြိုင်ကြတာတွေ့တယ်။ ဘာတွေပြိုင်လဲတော့မသိဘူး။
ကြရတယ်တဲ့။ (အလုပ်ဖြစ်တဲ့ အနည်းအကျဉ်း လူစုတော့ရှိတာပေါ့လေ။ တော်ကြသနော..)
Posted by ဒီးဒုတ် at 12/24/2006 09:38:00 PM0comments
Merry X'mas and Happy New Year'07
ဒီးဒုတ် X'mas အားလပ်ရက်တွေမှာ အသိုက်မြုံလေးထဲအိပ်နေမှာမို့လို့
ဘလော့ဂ်ရေးတာဖတ်တာ ခဏနားထားဦးမယ် ...
Posted by ဒီးဒုတ် at 12/19/2006 09:48:00 PM 1 comments
မောင်ဒီးကအိမ်ကိုစာပို့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်လာရင် ခပ်ကြောက်ကြောက်ဘဲ။ အထူးသဖြင့်
ရီဂျစ်စတာလုပ်ပြီး ခန့်ခန့်ထည်ထည် A4ဆိုဒ်လောက်ရှိတဲ့စာအိတ်တွေရောက်လာရင်
စာပို့ငနဲက လ္ဘက်ရည်ဘိုးမရရင်မပြန်ချင်ဘူး။ အထဲမှာ ဘာပါလဲသူသိတာမဟုတ်။
အများအားဖြင့် မောင်ဒီးရတဲ့အဲဒီလိုစာအိတ်ထူထူတွေက အလကားရတဲ့ စာစောင်တို့၊
သတင်းဂျာနယ်တို့များတယ်။ အဲ...ပိုကြောက်စရာကောင်းတာက ဘာစာအိတ်မှမပါဘဲ
ဖြတ်ပိုင်းပိစိလေးနဲ့ “စာတိုက်ကြီး စင်အမှတ် ဘယ်လောက်မှာ စာရောက်နေသည်
လူကိုယ်တိုင်လာရောက်ရွေးယူပါဆိုရင် စိတ်ကိုပျက်ကရောဘဲ”။ စာပို့လည်းအဲဒါမျိုး
တရံရောအခါက မောင်ဒီးကိုလိပ်မူပြီး ပါဆယ်တစ်ခုရောက်တဲ့အကြောင်း စာတိုက်
ကနေ ဖြတ်ပိုင်းလေးရောက်လာတယ်။ (နိုင်ခြံဂါး...အဲလေ နိုင်ငံခြားက ပါဆယ်
လာရင် ဒီလိုဘဲရကြလေ့ရှိတယ်။ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်းနဲ့ကမ်းနားလမ်း ထောင့်က
ဆက်သွယ်ရေးစာတိုက်ဌာနမှာ သွားထုတ်ရတယ်)။ အဲဒီတော့ မောင်ဒီးက ဘယ်သူ့
ဆီကလဲ ဘာတွေပို့လိုက်တာလဲပေါ့။ နိုင်ခြံဂါး ကလာတဲ့အထုတ်ဆိုတော့ စိတ်ဝင်
တစားဖြစ်ပြီး မနက်ခပ်စောစောထဲက သွား၊ ရောက်တော့ ဟိုမေးဒီမေးနဲ့ နာရီဝက်
(သေချာချင်ရင် ရုံးဝန်ထမ်းတွေမေးတာထက် ပွဲစားလိုလို အကျိုးဆောင်လိုလို
ကိုမေးလိုက်တာ အဖြေချက်ချင်းရတယ်။ ပစ္စည်းထုတ်ပေးရမလား ဘာပို့ချင်လို့လဲ
စသဖြင့်သူတို့ဈေးခေါ်တာတော့ငြင်းပေါ့ဗျာ။) မောင်ဒီးကလဲ ပွဲစားအားမပေးချင်တာထက်
ကိုယ်တိုင်သိချင် လုပ်ချင်တာကြောင့် ကိုယ့်ဘာသာရွေးမယ်ပေါ့။ကောင်တာကိုရောက်တော့
အသက် ၄၀ ဝန်းကျင်ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးတစ်ဦးတွေ့တယ်။ သူညွှန်ပြတဲ့နေရာမှာထိုင်စောင့်
ခိုင်းတာနဲ့ ဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့ ထိုင်စောင့်တယ်။ ရှေ့မှာ တစ်ယောက်က နိုင်ငံခြားက
ဈေးဖြတ်ပေးတယ်။ အဲ...မောင်ဒီးအလှည့်ရောက်တော့ဖောင်တွေဟိုဖြည့်ဒီဖြည့် ဖြည့်
ပြီးတော့နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်လဲပြရတယ်။ နောက်တော့ မိနစ်၂၀လောက်စောင့်ရ
မှာ “စင်အမှတ် ဘယ်လောက်မှာ ရှိတယ်ဆိုတာပါတယ်...အဲဒီမှာသွားယူလိုက်ရင်ရပြီ
မဟုတ်လား ဘယ်မှာသွားရှာနေရလို့ကြာတာလဲ” လို့လျှာသွားရှည်လိုက်မိတယ်။
စင်အမှတ်ပါတာက ပါတာဘဲ ဒီလိုဘဲရှာရတာကရှာရတာဘဲတဲ့...ကောင်းရော။
ဟော..စာအိတ်ထုတ်ယူလာပါပြီ။ စာအိတ်ကဖွင့်ကြည့်ထားပြီးသား။ ဝန်ထမ်းမိန်းမက
ပြောတယ်...စီဒီတွေပါတယ်တဲ့ စိစစ်ရေးတင်ရမယ်၊ ဟိုဘက်အဆောက်အဦးက
စိစစ်ရေးဌာနမှာ အစိစစ်သွားခံရမယ်တဲ့။ မောင်ဒီးနိုင်ငံသားကဒ်ကိုယူထားလိုက်ပြီး
အထုတ်ကိုသွား စိစစ်ခံခိုင်းတယ်။ အဲဒီတော့မှ မောင်ဒီ စီဒီတွေထုတ်ကြည့်မိတယ်။
ထုံးစံအတိုင်းပေါ့ အလကားရတဲ့ newsletter/free software တွေပါတဲ့ စီဒီနှစ်ချပ်နဲ့
ဆက်စပ်သတင်းစာစောင် ၂စောင်လောက်ပါတယ်။ အစ်မရယ် ဒါတွေက အလကား
ရတဲ့ ပညာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေပါဆိုတော့ “မလိုချင်ရင် မထုတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့
အကြောင်း လက်မှတ်ထိုးပြီး ထားခဲ့လို့ရပါတယ်တဲ့” ခပ်ညင်းညင်းလေးပြန်ပြောသဗျ။
စိတ်တစ်ချက်ခုသွားပြီးတော့ ထားခဲ့လိုက်တော့မလို့ဘဲ။ (ဟုတ်တယ်လေ အဲဒါတွေက
တခြားမှာ ရှာရင်လဲ ရပါ့။)။ ဒါပေမယ့် ပို့ပေးတဲ့သူတွေကိုအားနာတာကြောင့် ထုတ်သွား
မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ အဲဒါနဲ့ စိစစ်ရေးဆိုတဲ့နေရာရောက်သွားတယ်။ ပထမ
စားပွဲတစ်ခုမှာ စာရင်းသွင်းပြီး လက်မှတ်ထိုးရတယ်။ နောက်အတွင်းဘက်ခပ်ကျကျ
စားပွဲမှာ ယူနီဖောင်းဝတ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ထံသွားရတယ်။ ပုံပန်းကတော့ နေ့စဉ်အတော်
အသောက်ကျူးထားလို့ မျက်နှာခပ်နီအစ်အစ်ဘဲ။ ပစ္စည်းတွေကို တစ်ချက်ထုတ်ကြည့်
ပြီး ရှောရှောရှူရှူ လက်မှတ်ထိုးပေးတယ်။ စိတ်ထဲမှာတော့ ဒီဌာနဘယ်ဆိုးလို့လဲပေါ့လေ။
ဒါနဲ့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပြီး ပြန်ထွက်မယ်လုပ်တော့ အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်က “နှစ်ရာကျတယ်”တဲ့။
(အဲဒီတုံးက လ္ဘက်ရည်တစ်ခွက် တစ်ရာလောက်ရှိမယ်ထင်တယ်)။ ကောင်းရောကွာ။
အဲဒါနဲ့ ခပ်မြန်မြန်နဲ့ထုတ်ပေးပြီး မူလဌာနဘက်ပြန်လာခဲ့တယ်။ စောစောကဝန်ထမ်း
အမျိုးသမီးကိုပြန်ပြ ပြီးနိုင်ငံသားကဒ်ပြန်ယူ။ ပြီးတော့ ဈေးနှုန်း(သူတို့အပြောအရတော့
custom duty အခွန်တဲ့) ဖြတ်ပေးတဲ့လူကိုတစ်ခါစောင့်ရပြန်တယ်။ ပြီးတော့ မလှမ်းမကမ်း
ကကောင်တာမှာ ငွေသွားသွင်းရတယ်။ ၇၀၀-၈၀၀ လောက်ကျတယ်ထင်တယ်။
အဲဒါနဲ့ မောင်ဒီးလျှာထပ်ရှည်ပြန်ရော။ အလကားရတဲ့ပစ္စည်းဘဲ ပညာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တယ်
ပြီးတော့ စိစစ်ရေးကလည်း ကင်းလွတ်ပေးပြီးပြီ ဘာလို့ငွေသွင်းရတာလဲလို့မေးလိုက်တယ်။
ကောင်တာက အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်က ဒီငကြောင်တော့ဘာလာကြောင်တာဘာလိမ့်
ဆိုတဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်တယ်။ “များတယ်ထင်လို့လား၊ မကျေနပ်ရင် ဟိုဈေးဖြတ်တဲ့လူကို
သွားပြော”တဲ့။ မောင်ဒီးက များတယ်ထင်တာထက် ဘာလို့ငွေသွင်းရတာသိချင်တယ်။”
ဆိုတော့ တစ်ယောက်က နားမလည်ဘူးလား နိုင်ငံခြားကစာအိတ်တွေလာရင်ဒီလိုဘဲ
အခွန်ဆောင်ရတယ်တဲ့။ ပြီးတော့ သူ့ဘေးကနောက်တစ်ယောက်ဘက်ကြည့်လိုက်တယ်။
အဲသူ့ဘေးကတစ်ယောက်က “မဟုတ်ဘူး...နိုင်ငံခြားက ရီဂျစ်စတာလုပ်ထားတွေလာရင်
ဒီလိုအခွန်ဆောင်ရတယ်”တဲ့။ နောက်တစ်ယောက်ရှိသေးရင် နောက်အဖြေတစ်မျိုးထွက်
လာဦးမှာအသေအချာဘဲ။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် အောင့်သက်သက်နဲ့မောင်ဒီး ငွေသွင်းလိုက်တယ်။
ပြီးတော့ ကနဦး စာအိတ်ထုတ်ပေးတဲ့အမျိုးသမီးဆီမှာ ဖြတ်ပိုင်းပြပြီး ကိုယ့်အထုတ်ကိုယ်သွား
ထုတ်လိုက်တယ်။ နောက် တစ်ထောင်တန်နှစ်ရွက်ထုတ်လိုက်တယ်။ ပေါ်ပေါ်တင်တင်ဘဲ
စားပွဲပေါ်ကနေ အဲဒီအမျိုးသမီးကို ပေးလိုက်တယ်။ မငြင်းရှာပါဘူးကျေးဇူးတင်တဲ့
အကြည့်နဲ့ယူပြီး အံဆွဲထဲထည့်လိုက်တယ်။ မထင်မှတ်ဘဲနဲ့ရလိုက်တော့ သူမရဲ့အကြည့်က
“အစထဲက ဒီလိုပေးရင် ဒီလောက်ထိ ဟိုဟိုဒီဒီသွားစရာ ငွေသွင်းစရာ အချိန်ကြာစရာ
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် မောင်ဒီကတော့ ငါ့ကိုစိတ်မချမ်းမြေ့အောင်လုပ်လဲ
ငါကမင်းတို့ကို စေတနာနဲ့ပေးနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ သဘောနဲ့ပါ။ သူမစိတ်ထဲမှာ ငါရစ်လိုက်တဲ့
သူက တောင်ငါ့ကို စေတနာထားနိုင်ရင် နောက်ပစ္စည်းလာထုတ်သူတွေကို စေတနာနဲ့
ဆောင်ရွက်ပေးရင် အကျိုးကျေးဇူးခံစားရနိုင်တယ်လို့ ခံစားမှုကလေး၊အသိလေးတစ်ချက်များ
ရသွားလေမလားရယ်ပေါ့။ ဒါမှမဟုတ်လဲ အူကြောင်ကြောင်ငနဲဆီက ဘာမဟုတ်တဲ့
စာအိတ်တစ်ခု အတွက် ငွေနှစ်ထောင် ရလိုက်တယ်ဆိုပြီး နောက်ပိုင်းဒီလိုဘဲ
အင်း...မောင်ဒီးကတော့အူကြောင်ကြောင်နဲ့ဘဲ အဲဒီရုံးက ပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။
သေချာတာကတော့ နောက်ဆို ပို့သူဘယ်သူ ဘာတွေပို့လိုက်တယ် ကြိုတင်မသိရဘဲနဲ့တော့
စာကြွင်း။ ။ မောင်ဒီးသူငယ်ချင်း အဲဒီဝန်ကြီးဌာနက အရာရှိကို ကြုံလို့ပြောပြလိုက်တော့
ဟာသတစ်ခုလိုဘဲ သဘောကျရယ်မောပါတယ်။ နောင်ဒီလိုပစ္စည်းထုတ်ချင်ရင် သူတို့
ကို အကူအညီတောင်းရင် အခက်အခဲမရှိနိုင်ကြောင်း။ ဒါမှမဟုတ်လဲ ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းကို
ငွေပေးလိုက်ရင် (သူတို့အခေါ် ရေလောင်းလိုက်ရင်) ခုလိုခက်ခဲမှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်း
ပြောပါတယ်။ မောင်ဒီကတော့ အသေးအမွှားကိစ္စဖြစ်လို့ အကူအညီမလိုချင်ကြောင်း၊
ပို့စ်ခေါင်းစဉ်ကတော့ ရဘူးတဲ့သင်ခန်းစာအရည်အတွက်က အတော်များလို့ ခပ်တည်တည်
Posted by ဒီးဒုတ် at 12/14/2006 10:14:00 AM4comments
ခပ်လတ်လတ် အဝတ်အစားနဲ့သာမန်ရုပ်ရည်ကလေးပါဘဲ။ သူတို့နှစ်ယောက်ဓါတ်လှေခါး
အဲဒီမှာတင် လှပတဲ့သူက တံခါးပိတ်တဲ့ခလုတ်ကိုအမြန်လှမ်းနှိပ်လိုက်တယ်
အမြန်ဝင်လိုက်တယ်။ ချက်ချင်းဘဲ ခပ်လှလှအမျိုးသမီးကိုအလွန်ကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းပြောလိုက်တယ်။
အဲဒီအချိန်မှာခပ်လှလှအမျိုးသမီးမျက်နှာမထားတတ်အောင်ဖြစ်သွားတယ်။ တကယ်တော့သူမ ပိတ်လိုက်တဲ့တံခါးကို ဟိုသာမာန်ရုပ်ရည်နဲ့မိန်းမငယ်ကပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်လို့တံခါးပြန်ပွင့်သွားတာပါ။
သာမန်ရုပ်ရည်နဲ့မိန်းကလေးကတော့မပွင့်တပွင့်ဘဲတစ်ချက်ပြုံးလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ကြော်ငြာက သူတို့ကုမ္ပဏီရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကရိုးသားပြီးစိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့အကြောင်း အပေါ်ယံကာမကြည့်ဘဲ
ဒါကြောင့်လဲ လူလိမ်ခံရသူတွေဟာ စတိုင်ကျကျနဲ့လူတွေကသာအချီကြီးလိမ်သွားကြတာများတယ်မှုတ်လား။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဒီကြော်ငြာကပေးတဲ့အသိဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာ သတိချပ်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Posted by ဒီးဒုတ် at 12/12/2006 09:38:00 AM2comments
ဟိုလူထလုပ်ရင် အဲဒီလူ ဘောင်ကျော်တာ။
ဟိုလူက သူ့အယူအဆနဲ့ကို အကြောက်အကန်ပြောနေရင်
အဲဒါ တစ်စောက်ကန်း တစ်ယူသန်။
ဆရာ ဖေမြင့် ရေးတဲ့ စာဖတ်သမား၏မှတ်စုများ (ဩဂုတ် ၂၀၀၃)
Posted by ဒီးဒုတ် at 12/08/2006 05:24:00 AM 1 comments
အံ့စရာပါတဲ့။ ၅မိနစ်လောက်ကြာတော့လူသုံးယောက်ထဲက တစ်ယောက် “ဘဲ”
စေသတည်းတဲ့”။ ၁၀မိနစ်လောက်ကြာပြန်တော့နောက်တစ်ယောက်က “ဘဲ”ကို
ထိုက်တန်ရပါသလဲ”။ စိန့်ပီတာမဖြေခင်ဘဲ အမျိုးသမီးကဝင်ဖြေလိုက်တယ်...
အလုပ်တွေများနေတယ်။ မအားတဲ့ကြားက ရသလောက်လေးရေးတင်လိုက်တယ်။
Posted by ဒီးဒုတ် at 12/06/2006 11:02:00 PM3comments
Posted by ဒီးဒုတ် at 11/30/2006 11:42:00 PM 1 comments
ပြင်ရခက်တယ်။တစ်ချို့ကြတော့ အသိခေါက်ခက်အဝင်နက် ဆိုသလို သိရဲ့သားနဲ့
ဒီးဒုတ်ကြည့်ဘူးတဲ့ “White Dog--ခွေးဖြူ” ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့ ဇာတ်လမ်းကျောရိုး
နည်းနည်းဆင်တယ်။ အဲဒီကားမှာ ခွေးဖြူတစ်ကောင် (ဝံပုလွေမျိုးရိုးပုံစံ၊ အကောင်က
အမွေးဖြူဆွတ်တယ်၊ ကြီးမားလွန်းပြီး အတော်လှတယ်) ဒဏ်ရာတွေနဲ့လမ်းပေါ်မှာ
လဲနေတာတွေ့တော့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်က (နာမည်က “ခင်” ဆိုပါစို့) သနားပြီး
ကားပေါ်တင်ခေါ်လာတယ်။ ကုသပြုစုပေး၊ အစာတွေကျွေးလို့ ထူထူထောင်ထောင်ဖြစ်
လာတော့ သံယောဇဉ်ဖြစ်ပြီး “ခင်”က အိမ်မှာဘဲဆက်မွေးထားလိုက်တယ်။
အဲဒီမှာ ပြဿနာစတော့တာဘဲ။ “ခင်”ကလွဲလို့ကျန်တဲ့သူမှန်သမျှရန်မူတယ်။
ရန်မူတယ်ဆိုတာ ဟောင်ရုံ မာန်ဖီရုံလောက်မဟုတ်ဘူး။ အသေကိုက်သတ်မဲ့ပုံ။ “ခင်”ရဲ့
ချစ်သူနဲ့တောင် ဒီအတွက် ကတောက်ကဆ ဖြစ်ခဲ့တယ်။ နောင်ပိုင်းမှာ ခွေးဖြူ ညဖက်
အပြင်ထွက်ပြီး လူတွေလိုက်ကိုက်တယ်။ ကိုက်သမှ အတော် ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုကိုက်တာ။
ခွေးဖြူရဲ့ ဒီလိုအပြုအမူကို “ခင်”မသိသေးဘူး။ ပါတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အပြောကြောင့် ဒီခွေး
အတော်ဆိုးတယ်ဆိုတာလောက် အထိဘဲလက်ခံတယ်။ နောက်တော့ ခွေးဖြူရဲ့ပြဿနာက
အဲဒီတော့ နာမည်ကြီး တိရိစ္ဆာန်ထိန်းကျောင်းပေးတဲ့နေရာမှာသွားအပ်လိုက်ရတယ်။
အဲဒီကျောင်းက အတော်ဆုံးထိန်ကျောင်းသင်ကြားပေးတဲ့ဆရာက ခြင်္သေ့တွေ၊ ကျားတွေလို
ဆရာဖြစ်တယ်။ “ခင်”ဟာသံယောဇဉ်ကြီးလှတဲ့အတွက် ဆရာနဲ့ပေါင်းပြီးလိုအပ်သမျှ
ခွေးဖြူလိမ္မာလာစေရေးအတွက်ကြိုးစားခဲ့တယ်။ (အဲဒီအချိန်မှာ ခွေးဖြူကိုလှောင်အိမ်ထဲမှာ
ထည့်သွင်းလေ့ကျင့်ရတယ်။ လှောင်အိမ်အပြင်ထုတ် တာနဲ့ အသားမည်းတဲ့ဆရာ
(လူမည်း)ကိုကိုက် တော့တာဘဲ။ သေချာတာက သေအောင်အထိကိုက်မှာပါဘဲ) ။
နဂိုကတည်းက တိရိစ္ဆာန်တွေကို စိတ်အားထက်သန်သင်ကြားလာခဲ့တဲ့ဆရာဟာ
နည်းမျိုးစုံသုံးပြီး ခွေးဖြူကို အတော်ခက်ခက်ခဲခဲသင်ခဲ့ရတယ်။ ဥပမာ ဆရာက ခန္ဓာကိုယ်မှာ
သားရေအဝတ်ထူထူတွေဝတ်ပြီး သူ့စိတ်ကြိုက် သူမောလာပြီးမကိုက်နိုင် တော့တဲ့အထိ
အကိုက်ခံတယ် ပြီးမှသူကို အစာကျွေးရင်း မေတ္တာနဲ့ပွတ်သပ် ပေးတယ်။ အဲဒီနည်းဟာ
အတော်ထိရောက်တယ်။ တစစနဲ့ဆရာနဲ့ခွေးဖြူ ကြားမှာ ယုံကြည်မှုရလာတယ်။
“ခင်”လည်းအတော်ဝမ်းမြောက်တယ်။ အဲဒီတော့ လှောင်အိမ်အပြန်ထုတ်တော့မယ်လို့
ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။ လှောင်အိမ်အပြင်ထုတ်မဲ့နေ့မှာ လူစုံတက်စုံလာကြတယ်။
ဆရာ၊ “ခင်” နဲ့ သင်တန်းကျောင်းကလူတွေရယ်ပေါ့။ ရှောရှောရှူရှူပါဘဲ ခွေးဖြူ အမှီးရမ်း
ပြီးထွက်လာတယ်။ လူတွေဝမ်းသာကြတယ်။ စကားတွေပြောနေကြရင်းနဲ့ ခွေးဖြူကိုတောင်မေ့နေလိုက်ကြတာ…..မကြာခင်ဘဲလူတစ်ယောက်က
မြား အစွယ်တွေအဖွေးသားနဲ့ အပီအပြင် အသေကိုက်သတ်တော့မယ့်ပုံဘဲ။
ဆရာကသိလိုက်တယ။် ခွေးဖြူရဲ့ဦးတည်ချက်က တစ်ဦးတည်း
သော လူမည်း ဖြစ်တဲ့သူ့ကိုဘဲဆိုတာကိုပေါ့။ အသင့်ဆောင်ယူလာတဲ့ ပစ္စတို
သေနတ်ထုတ်ပြီး သူ့ဆီကိုတဟုန်တိုးပြေးဝင်လာတဲ့ ခွေးဖြူကို ပစ်လိုက်
တယ်။ နေရာမှာတင် ဆရာရဲ့မျက်နှာကို စိုက်ကြည့်နေရင်း ခွေးဖြူ အသက်
တကယ်တော့ခွေးဖြူဟာ လူမည်း(နီဂရိုး)တွေကိုတွေ့ရင် မုန်းတီးပြီး ကိုက်
သတ်အောင် မွေးကာစ ငယ်ငယ်လေးကတည်းက လေ့ကျင့်ပေးထားတဲ့
ခွေးတစ်ကောင်ဖြစ်နေခဲ့တယ်။ (အဲဒီတုံးက သူတို့နိုင်ငံတွေမှာ လူမျိုးရေး၊
အသားအရောင်းခွဲခြားမှုတွေ ပြင်းထန်နေတုံးဖြစ်တယ်။)။ ဒီးဒုတ်တို့နိုင်ငံမှာ
လည်း လူခွေးတွေအများကြီးရှိနေတယ်။ သူတို့ဟာ အမှားအမှန်မခွဲခြား
တတ်လို့လား၊ ငယ်ငယ်ကတည်းက ကျုံးသွင်းလေ့ကျင့်ပေးခြင်းခံခဲ့ရလို့လား၊
အကိုက်ကြမ်းကြတယ်။ သင်ကော လူခွေးတွေအကိုက်ခံဘူးသလား။
ဇာတ်ကားကတော့ *ဒီဟာ* ပါ။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၆-၇နှစ်လောက်ကတည်းကကြည့်ဘူးတာဆိုတော့ မေ့နေပြီ။
Posted by ဒီးဒုတ် at 11/30/2006 03:16:00 PM2comments
မနက်ဖြန် ဒီဇင်ဘာ ၁ရက်နေ့မှာထွက်ရှိမယ်ဆိုတဲ့ အကျော်အခွ အသုံးချဆော့ဖ်ဝဲလ်
အကြောင်းပါ။ နာမည်က *ဆိုင်ဖွန်*တဲ့။ ကုဒ်ကိုပွင့်ပွင်းလင်းလင်းပေးထားတဲ့ opensource အမျိုးအစားပါ။ ဘယ်လိုရေးသားထားတယ်...ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်မှုတွေ
တီထွင်ရေးသားနိုင်အောင် source code ပါရနိုင်ပါတယ်။ငယ်ငယ်တုံးကသိပ္ပံမှာသင်ဘူးတဲ့ ရေသွယ်ယူတဲ့နည်းစံနစ်တစ်ခုအကြောင်းမှတ်မိဦးမှာပေါ့။အတားအဆီးတစ်ခုကို
*တိုရွန်းတိုမြို့သားများဓါတ်ခွဲခန်း*က ကွန်ပျူတာဂုရုတွေပေါင်းပြီးကလိလိုက်တဲ့ ဆိုင်ဖွန်ဟာဝဘ်ဆိုဒ်တွေကိုအတားအဆီးမဲ့ကျော်ခွပေးပါမယ်တဲ့။ အသုံးပြုနေစဉ်မှာ ချိတ်ဆက်မှုကို(ကုဒ်စကားဝှက်)Encryptလုပ်ထားမဲ့အတွက်ကြောင့်ခြေရာခံဘို့
Posted by ဒီးဒုတ် at 11/30/2006 10:39:00 AM 1 comments
(ဘယ်လိုရောက်သွားမှန်းတောင်မမှတ်မိတော့ဘူးဗျ။)။ စာရေးသူနာမည်ကတော့ အဲဒီဘလော့ဂ်ရောက်မှဘဲသွားကြည့်တော့ဗျာ။ *အဖွင့်ပို့စ်လေး* ကတချို့စာသားလေးတွေသဘောကျမိရဲ့။
“ရှင်းရှင်းနဲ့ဘွင်းဘွင်း ဖြဲကြစတမ်း” တဲ့။ ဘယ်လောက်ခွန်အားရှိလိုက်တဲ့နာမည်လဲ။
“ဖြဲ”တယ်ဆိုတာ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းမယ် လို့အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့ကာလပေါ်စကားပါ။ (အခြားလျှောက်မတွေးနေနဲ့ဦးနော်....)
Posted by ဒီးဒုတ် at 11/29/2006 01:08:00 PM0comments
မောင်ဒီးငယ်ငယ်က လူကြီးတွေဆုံးမတာ ခါးမတ်မတ်ထိုင်ရမယ်တဲ့။ ခုတော့ ပညာရှင်ဆိုသူတွေက ပြောကြပြန်ပါပြီ။ မတ်မတ်ထိုင်တာ ခါးအတွက်ဥပါဒ် ရှိတယ်ဆိုဘဲ။ စကော့နဲ့ ကနေဒီယန် သုတေသီတွေ MRI ပုံဖော်စက်သုံးပြီး လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ မတ်မတ်ထိုင်တာ (ကြာရင်) ဒဏ်ဖြစ်စေသတဲ့။ အကောင်းဆုံး အနေအထားက ၁၃၅ ဒီဂရီလောက် နောက်ကိုမှီပြီးထိုင်သင့်တယ်ဆိုရဲ့။ ပညာရှင်တွေဆိုသေးတာက ထိုင်ခြင်းဟာ ခါးနာခြင်းကိုဖြစ်စေပါသတဲ့။ သီချင်းထဲကလို “ထိုင်နေလို့တော့ ဘာမှဖြစ်မလာဘူး” လို့မဆိုနိုင်တော့ဘဲ “ထိုင်နေလို့တော့ ခါးကလက်မခံဘူး” လို့ပြောင်းဆိုသင့်တာပေါ့နော်။ အင်္ဂလိပ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ (BSA- British Chiropractic Asso. ခန္ဓာကိုယ်ပုံသဏ္ဌာန်ဆိုင်ရာကုထုံးရေးရာအဖွဲ့ အစည်း လို့ဆိုရမလားမသိဘူး ) ကတော့ လူ၃၀ရာနှုံးလောက်ဟာ တစ်နေ့ ၁၀နာရီထက်ပိုပြီး ထိုင်ကြတယ်တဲ့။ အဲဒီ၃၀ရာနှုံးရဲ့ထက်ဝက်က နေ့လည်စာတောင်ထမစားကြဘူးတဲ့ဗျ။ “ကျွန်ုပ်တို့ ခန္ဓာကိုယ်တွေဟာ ထိုင်နေဘို့ ပုံစံထုတ်ထားတာမဟုတ်ဘူး” လို့ BSA က “ရီရှီ” ဆိုသူကဆိုပြန်တယ်။ ထိုင်ခုံနောက်မှီတွေက ၁၃၅ဒီဂရီမှီထိုင်ဘို့ မလွယ်ကူဘူး ၁၂၀ သို့မဟုတ် ၁၂၀ခပ်လျော့လျော့လောက်ထိုင်တာ ပိုကောင်းတယ်လို့ပြောပြန်ရော။
ဒီသုတေသီတွေက ပရိဘောဂဆိုင်တွေ အလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်နေပြန်ပြီနဲ့တူတယ်နော်။ အိမ်ကခုံအဟောင်းတွေပစ်ပြီး နောက်မှီ ခပ်လျှောလျှောခုံတွေထပ်ဝယ်ရမလိုဖြစ်နေပြန်ပါပြီ။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် အထိုင်များတဲ့သူတွေ ချင့်ချိန်ပြုပြင်ဘို့ စဉ်းစားရမယ့်ကိစ္စဆိုတော့မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ အသေးစိတ်မူရင်းကိုတော့ *ဒီမှာ*ဖတ်။ အင်း...ခါးညောင်းလာပြန်ပြီ...လမ်းခဏတော့ ထလျှောက်ဦးမှ။
Posted by ဒီးဒုတ် at 11/28/2006 04:29:00 PM 1 comments
ဝိဉာဉ်မိန်းကလေးတဲ့။ ကနေဒါ-တိုရွန်းတိုးမြို့ကအိမ်အိုဟောင်းကြီးထဲမှာ ဗွီဒီယို ရိုက်နေရင်း ပေါ်လာတာ ရိုက်နေတဲ့သူတောင်ကြောက်လန့်ပြီးထွက်ပြေးရတယ်။ ဂူဂယ်လ်ဗွီဒီယို *ဒီလင့်မှာ* တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှူနိုင်ပါတယ် အောက်က embedded video ကတော့ page လေးတတ်တဲ့အတွက်မကြာခင်ပြန်ဖျက်ဘို့စဉ်းစားထားတယ်။
တကိုယ်ရေ အပျိုကြီးများ အနှီကဲ့သို့အပျင်းဖြေနိုင်ကြပါသည်။ ခွိ...ခွိ...
နောက်...*ဒီလင့်ခ်တစ်ခု*က လက်အရိပ်ပြပွဲတဲ့ ညစ်ညမ်းတဲ့အပြုအမူပေမယ့် ဟာသမြောက်လှပါတယ်။ အတော်လည်းပေါက်တီးပေါက်ရှာနိုင်ကြပါရဲ့။
Posted by ဒီးဒုတ် at 11/28/2006 03:38:00 PM0comments
တနေ့မှာသူတော်စင်ဆိုသူက ဘုရားသခင်ကိုဒီလိုလျှောက်တင်သတဲ့...“အရှင် ကျွန်တော်မျိုး နိဗ္ဗာန် နဲ့ ငရဲ ဘာတွေလဲဆိုတာ သိမြင်ချင်စမ်းပါဘိ”
ဘုရားသခင်က “ကောင်းပြီ..ငါ့နောက်ကလိုက်ခဲ့” ပေါ့..
ရှေ့ဆောင်ခေါ်သွားတဲ့နေရာမှာ တံခါးနှစ်ပေါက်(အခန်းနှစ်ခန်း) ရှိသတဲ့။သူတော်စင်က
သိလိုစိတ်နဲ့ ပထမတံခါးပေါက်ကို အသာဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်။ အခန်းရဲ့အလည်မှာ
စားပွဲဝိုင်းကြီး တစ်ခုရှိတယ်။ စားပွဲဝိုင်းအလည်မှာတော့ အငွေ့တထောင်းထောင်းနဲ့
ပိန်လှီပြီးတော့ မကျန်းမာတဲ့ပုံပေါက်နေကြတယ်။ သူတို့အားလုံးမှာ ဇွန်းတွေရှိကြတယ်။
ဒါပေမယ့်ဇွန်းလက်ကိုင်တွေက ရှည်လျားလွန်းပြီးတော့ လက်တွေမှာ
အသေချည်ထားတယ်။ အဲဒီတော့ ဟင်းကိုခပ်လို့ရတာတောင် ဇွန်းကို ပါးစပ်နားရောက်
အောင်မပို့နိုင်ကြတော့ဘူးပေါ့။ သူတော်စင်ဟာ အနိဌာရုံမြင်ရတာ တုန်လှုပ်မိသတဲ့။
“ကျွန်တော်မျိုး ငရဲကိုသဘောပေါက်သွားပြီ” လို့လျောက်သတဲ့။
ပထမအခန်းထဲက အခင်းအကျင်းနဲ့ပုံစံတူတူဘဲ။ သွားရည်ကျလာအောင် မွှေးကြိုင်တဲ့
ဒါပေမယ့် သူတို့တွေကတော့ အာဟာရကောင်းစွာရကြပုံနဲ့အုတ်အုတ်ကြွက်ကြွက်
သူတော်စင်က ဒီတခါတော့ “ကျွန်တော်မျိုး နားမလည်ပါလို့” လျောက်သတဲ့။
တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အပြန်အလှန် ကျွေးရမယ်ဆိုတာကို သိရှိကြတယ်”
ရေးသူက အမည်မသိဖြစ်ပြီး ဖတ်အပြီးမှာ ဒီးဒုတ်ကတော့ လောကရဲ့
ဒီးဒုတ်တို့ပါတ်ဝန်းကျင်မှာလည်း အတ္တကြီးပြီးအမှောင်ဖုံးနေသူများ။ ငါကလွဲပြီး
ဘယ်သူကိုမှ အရာမထင်သူများဟာ လောကငရဲထဲ အရှင်ရောက်နေသူတွေပါဘဲ။
Posted by ဒီးဒုတ် at 11/27/2006 10:35:00 AM0comments
သတိပေးကြေငြာချက် ဆိုင်းဘော့ဒ်လေးလုပ်ချင်ရင် *ဒီဆိုဒ်* ကဝန်ဆောင်မှုပေးနေတယ်။ အခမဲ့ပါ။
ဒီးဒုတ်စမ်းကြည့်တဲ့ ဥပမာလေးက အောက်မှာ....
Posted by ဒီးဒုတ် at 11/26/2006 11:21:00 AM0comments
*ငါဆိုတဲ့သီချင်း* က အော်သံများ criers.blogspot.com ရဲ့ဘလော့ဂ်အသစ်ထင်ပါတယ်။ သူ့ကဗျာလေးဖတ်ကြည့်ပါ။ တကယ့် Ironic ဘဲဗျာ။ အတော်ရယ်မိတယ်။ ပြောင်မြောက်အောင်ဖွဲ့နိုင်ပါတယ်။ ...
ကော်ပီခွေ ရှိလား၊ ကော်ပီခွေတွေကြောင့် စိတ်ညစ်နေတဲ့ ကော်ပီဆိုသူ ရှိလား၊
လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ ဒို့ရန်သူ ဆိုင်းဘော့ဒ် ရှိလား၊
ကျူရှင်ကြောင်ငြာ ရှိလား၊ ဒို့တာဝန်အရေးသုံးပါး ရှိလား၊
အပွင့်တွေ ရှိလား၊ မော်တော်ပီကယ်ရှိလား၊
ခရီးသယ်တွေအတွက် အော်ကြီးဟစ်ကျယ် ဂရုစိုက်ပေးရှာမယ့်
တွန်းတွန်းတိုက်တိုက် ယဉ်ကျေးမှု ရှိလား၊
ရာဇ၀င် ရှိလား၊ ပုဂံရှိလား၊
သီပေါမင်း ရှိလား၊ (အဲဒီမင်းဆက်ကို ဆက်ခံတဲ့)ေ-ာက်ပေါမင်း ရှိလား
အပြည့်အစုံကိုတော့ *ဒီမှာ* သွားဖတ်ကြဗျာ။
Posted by ဒီးဒုတ် at 11/26/2006 01:12:00 AM0comments
မောင်ဒီးဒုတ် တမ်းပလိတ်လေး ပြင်လိုက်တယ်။ (အားအားယားယား)။ မျက်စိ၊ ခါး၊ လက် အတော်ညောင်းသွားတယ်။
အမြင်မတော်တာရှိရင် ဝေဘန်ပြုပြင် အကြံဥာဏ်ပေးကြပါဦး။
Posted by ဒီးဒုတ် at 11/25/2006 10:50:00 AM0comments
Posted by ဒီးဒုတ် at 11/23/2006 12:20:00 AM 1 comments
ဒီ Musicovery.com ဆိုတဲ့ဆိုဒ်ရဲ့ အိုင်ဒီယာလေး
တော်တော်ကြိုက်တယ်။ ဘာလို့များ ဒီလောက်တောင်
Posted by ဒီးဒုတ် at 11/20/2006 01:24:00 PM 1 comments
Stephen Hawking's Universe 03
အချိန်ပေးပြီးပြန်ကြည့်ရမယ်....ဒီမှာ နဲ့ ဒီမှာ
Posted by ဒီးဒုတ် at 11/17/2006 11:27:00 PM0comments
ယခင်ကထက်ပိုပြီး ယခုမျက်မှောက်အချိန်မှာ အဆောတလျှင်ရှင်းလင်းဖြေကြားရမှာက
“သဘာဝတရားကြီးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးရဘို့ နိုင်ငံရေးဗျူဟာတွေမရှိသေးတာရယ်
ရေရှည်မလုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ မပေးဆပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေဟာ ဘာကြောင့်လဲ” ဆိုတာဘဲဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီတော့ “အဆောတလျှင်ဖြေရှင်းလုပ်ဆောင်ရမှာက ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အကျိုးဆက်
ဆိုးရွားမှုတွေကိုသိဘို့ နဲ့ ကမ္ဘာကြီးအပူချိန်ကိုလျော့နည်းလာစေရန် တစ်ကမ္ဘာလုံး
အထက်ကစာကြောင်းတွေက သဘာဝသယံဇာတစွမ်းအင်ကုန်ကြမ်းတွေထုတ်ယူသုံးစွဲမှုပြီးတော့ ဖြစ်လာမယ့်ဆိုးကျိုးတွေကို အချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကသတိပေးထားတဲ့စကားများဖြစ်ပါတယ်။ သဘာဝသယံဇာတတွေထဲမှာ ရေနံဟာအဓိကအကျဆုံးသော စွမ်းအင်ကုန်ကြမ်းသယံဇာတတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ (ဆက်စပ်နေတဲ့ သဘာဝဓါတ်ငွေ့ဟာလည်းအဓိကပါဝင်ပါတယ်။) လူတွေရဲ့နေ့စဉ် ရေနံနဲ့သဘာဝဓါတ်ငွေ့ တွေကို စွဲလမ်းလွန်းကြ(အသုံးအစွဲကြမ်းလွန်းကြ) တာကြောင့်သဘာဝသယံဇာတစွမ်းအင်ကုန်ကြမ်းတွေဟာ ယခင့်ယခင်တုံးက အနီးအနားမှာတင် မခက်ခဲဘဲရှာဖွေတူးဖော်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် တချိန်ကျရင်ရှာဖွေလို့မရနိုင် လောက်အောင်ရှားပါးကုန်ဆုံးသွားတော့မှာပါ။(အခုတောင် ရှာရအတော်ခက်ခဲနေပါပြီ။) အဲဒီအချိန်မှာ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကို အဓိကထားသုံးစွဲရမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဒီပုံမှာပြထားပါတယ်။
Posted by ဒီးဒုတ် at 11/16/2006 11:31:00 AM0comments
Posted by ဒီးဒုတ် at 11/14/2006 12:03:00 AM0comments
Posted by ဒီးဒုတ် at 11/13/2006 11:19:00 AM4comments
privacy ဆိုတဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအခွင့်အရေးကို ဝင်ရောက်ကျူးကျော်
သင့်ရဲ့လက်ကိုင်ဖုန်းဟာ မိသားစုနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူ
(ဖုန်းရဲ့ အချက်ပြလှိုင်း signal ကြောင့်) နည်းပညာအရ သိစေနိုင်ပါတယ်။
သင် Googleမှာ ကျန်းမာရေးအချက်အလက် ရှာဖွေတာဟာ (သင်ဘာတွေ
ရှာဖွေတယ်ဆိုတာ) မူအရတော့ လုံခြုံစိတ်ချရနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်ငြားလည်း
သင့်online ပြုမူဆောင်ရွက်ချက်တွေဟာ သင်ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုမိတဲ့နေရာတွေမှာ
ထောင်ထားတဲ့ ပျားရည်အိုးတွေ (Honey Pot) ရဲ့ထောင်ချောက်
Honey Pot ဆိုတာ ဆိုဒ်တစ်ခုကိုလာသူတွေနဲ့ပါတ်သတ်တဲ့ အချက်အလက်
တွေကို မှတ်ထားတဲ့ (အဓိကကတော့ ဖောက်ထွင်းသူ
တွေကို စောင့်ဖမ်းဘို့တပ်ဆင်ထားတဲ့) အသုံးချနည်းပညာဖြစ်ပါတယ်။
Privacy ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအခွင့်အရေး အတွက် မျှော်လင့်ချက်
လိုအပ်ချက်တွေဟာ ဥပဒေကြောင်းအရ ကာကွယ်ပေးမှုတွေ နည်းပါးနေသေးတယ်။
အလကားရမယ်ဆိုလို့ Site တွေမှာ ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်တွေကို ဟိုဖြည့်
သင်ပေးရတာနဲ့ ရလိုက်တာနဲ့တန်ရဲ့လား ဆန်းစစ်ပါ။ မြန်မာပြည်မှာတော့
လူတော်တော်များများ အလကားရမယ်ဆိုရင် လျှောက်လွှာတစ်မျက်နှာ
(ဘာမှမရဘဲတောင် အနိုင်ကျင့်ပြီး ဟိုတောင်းဒီတောင်း ဟိုဖြည့်ခိုင်း
အထူးသဖြင့် နိုင်ငံကြီး တချို့မှာတော့ ဆောရီးဘဲ ကြော်ငြာချင်ရင်
ထိုက်တန်တဲ့ အရာ တစ်ခုခုရမှ ကိုယ်ရေးအချက် နည်းနည်းပါးပါးရမယ်
ကဲ...ခင်ဗျားတို့ကော ဘာတွေ ဖြည့်ဘူး...ပေးဘူးသလဲ?
*Privacy အပိုင်း(၁) ဒီမှာ*
ကိုးကား...Electronic Frontier foundation EFF
ကျွန်တော်ကြည့်ဘူးတဲ့ privacy နဲ့ဆက်စပ်တဲ့ရုပ်ရှင်က
Enemy of the State (၁၉၉၈) ပါ။
Posted by ဒီးဒုတ် at 11/10/2006 03:14:00 PM0comments
မရှိရင်တော့ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးကိစ္စတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရဘွယ်ရှိတယ်။”
ကမ္ဘာ့သတင်းအချက်အလက်ကွန်ယက်ကြီး WWW ရဲ့ဖခင်ကြီးလို့အသိအမှတ်ပြုခြင်းခံထားရသူ အင်္ဂလိပ်လူမျိုး
“ဆြာတင်ဘာနာစ်လီ--Sir Tim Berners-Lee” တစ်ယောက်တော့
သူစိတ်ပူပန်မိတာက အင်တာနက်ကိုသတိလက်လွတ်သုံးစွဲနေမှုတွေဟာ ဆိုးရွားတဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေ (ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကသွေဖီမှု၊ သတင်းအချက်အလက်မတိကျမမှန်ကန်မှု၊ စတာတွေ)
ဒါကြောင့် Tim ဟာ သတင်းကွန်ယက်တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှုရဲ့
web science research project -- သတင်းကွန်ယက်ပညာရပ်ဆိုင်ရာ
သုတေသနစီမံကိန်း တစ်ခုကိုစတင်လိုပါတယ်တဲ့။ သူရဲ့သုတေသနဟာ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘာသာရပ်ထက်ပိုမိုတဲ့ကိစ္စတွေပါဝင်မှဖြစ်ပြီး တက္ကသိုလ်တွေမှာတွေ့ရလေ့မရှ်ိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။
သူဟာ လူမှုရေးနဲ့နည်းပညာ ကျိုးကြောင်းကိစ္စရပ်တွေကိုလေ့လာရာမှာ
စည်းစံနစ် ရှုထောင့်အဖြာဖြာကသုတေသနပညာရှင်တွေကို စည်းရုံးလေ့လာဘို့ ဆန္ဒရှိနေပါတယ်တဲ့။ ပိုပြီး နှစ်ထောင်းအားရစရာ စိတ်ဝင်စားဘွယ်တွေဖြစ်လာပြီး ဘာသာရပ်အသစ်တစ်ခုလို့လည်းဆိုပါတယ်။
source: ဘီဘီစီ ရဲ့ ဒီနေရာ မှာအသေးစိတ်ဖတ်ပါ။
Posted by ဒီးဒုတ် at 11/10/2006 09:04:00 AM0comments
Google, Microsoft, Yahoo မြေပုံတွေအပြင်အခြားမြေပုံတွေအတော်များများပါကြည့်လို့ရတဲ့ဆိုဒ်ပါ။
Flash သုံးပါတယ်။ စိတ်ကူးကောင်းတဲ့ ဖန်တီးမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Browser မှာ
flash pluginရှိရင် ဘာမှအထူးအထွေ install လုပ်စရာမလိုဘဲ ကမ္ဘာ့မြေပုံတွေကြည့်ရှုလို့ရကြောင်းပါခင်ဗျား။
Posted by ဒီးဒုတ် at 11/09/2006 02:19:00 AM0comments
ဒီလိုဘဲ အချိန်နည်းနည်းအားနေရင်ဟိုကြည့်ဒီကြည့်ပေါ့ဗျာ…..ဒါနဲ့ဒီဟာကိုတွေ့သွားကောဗျား။ ဟုတ်တော့လည်းဟုတ်သား ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်းတခါတလေ အင်္ဂလ်ိပ်အသံထွက်ကိုမြန်မာသံနဲ့ပြန်ရေးတာ တော်တော်လက်ပေါက်ကပ်တဲ့ကိစ္စ…
အခုတွေ့တာက foreverspace bannerမှာ အီးဘုခ် လို့ရေးထားတဲ့ဟာ..တစ်မျိုးတော့တစ်မျိုးဘဲဗျ..စိတ်ထဲမှာရွတ်ကြည့်တယ်
Posted by ဒီးဒုတ် at 11/09/2006 02:01:00 AM2comments
မကြာသေးခင်ယခင်သီတင်းပါတ်က စပိန်တရားသူကြီးတစ်ဦးရဲ့ “တကိုယ်ရေသုံးစွဲရန် ဖိုင်ဝေငှမှု-File sharing” ကိုခွင့်ပြုနိုင်မယ်လို့ချမှတ်တာဟာ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေကြားမှာမကျေနပ်စရာတွေ၊ ပြန်လည်ချေပစရာတွေ အုတ်အော်သောင်းနင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ တရားသူကြီး ပက်ဇ်အယ်လ်ဒီကို ဟာ တရားစွဲဆိုခံရတဲ့ သီချင်းအတော်များများဖြန့်ဝေခဲ့သူ(အမည်မဖော်ပြ)တစ်ဦးရဲ့အမှုကို ပယ်ဖျက်လိုက်ပါတယ်။ တရားခံရဲ့ပြုမူချက်ဟာ အများသူငါလုပ်နေကျ လူမှုရေးထောင့်ကကြည့်ရင်လက်ခံနိုင်တဲ့ ပြုမူချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ငွေကြေးအကျိုးအမြတ်မပါတဲ့ကိစ္စသက်သက်သာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။
စပိန်နိုင်ငံဟာ ဖိုင်ဖြန့်ဝေသုံးစွဲကြတဲ့ပင်မနေရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာ ကာလအတော်ကြာခဲ့ပါပြီ။ ယခုလိုစီရင်ချက်ချမှတ်လိုက်တာကြောင့်ဒီအလေ့အထကိုပိုမို
အားပေးအားမြှောက်ပြုစေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒီစီရင်ချက်မတိုင်ခင်ယခင်နှစ်များက မူပိုင်ခွင့်ဟာအသာစီးနေရာမှာရှိခဲ့လို့ စီဒီတွေရောင်းပန်းလှခဲ့ရပါတယ်။ IFPIရဲ့ကိန်းဂဏန်းများကိုဆန်းစစ်တဲ့အခါမှာ အသင့်သွင်းထားတဲ့ CD လိုပစ္စည်းတွေရောင်းအားဟာ ၂၀၀၁လောက်ကစပြီး ၆၀ရာနှုန်းလောက်ကျဆင်းခဲ့ပါတယ် (၂၀၀၅ မှာ ရောင်းရတဲ့အရေအတွက်ဟာ ၃၄.၆သန်းလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။) ဒီအတောအတွင်းမှတော့ ဒီစီရင်ချက်ဟာ ဥပဒေရေးရာတွေ ဥပဒေပြုသူတွေဦးနှောက်စားစရာ အချေအတင်ဖြစ်စရာဆိုတာအသေအချာပါဘဲ။ ပြီးတော့ လူ့မှုအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအယူအဆတွေပြောင်းလဲလာနိုင်ပြီး၊ တရားရုံးများ ဥပဒေပြုသူများကြားမှာ ပိုမိုအလေးထားဆောင်ရွက်ရမှာအသေအချာပါဘဲခင်ဗျား။
စာကြွင်း။ ။IFPI ဟာ နိုင်ငံတကာတေးထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
မူရင်း။ ။ http://www.digitalmusicnews.com/
Posted by ဒီးဒုတ် at 11/08/2006 11:47:00 AM0comments
ကားပြတင်းပေါက်တွေကို အရောင်နဲ့ စတစ်ကာတွေကပ်ထားတယ်ထင်လို့..လတ်စသတ်တော့..ကိုနီဂရိုးများပါလား...
ဒါက..Animated gif ပုံလေး..ဖန်တီးတဲ့လူ..စိတ်ကူးအတော်ကောင်းဗျား
Posted by ဒီးဒုတ် at 11/07/2006 03:39:00 PM2comments
Source: Netcraft Click to see clear picture.
၁၉၉၅ ဩဂုတ်လမှာ ဝဘ်ဆိုဒ် ၁၉၀၀၀ လောက်ဘဲရှိခဲ့ရာက ယခုဆိုရင် သန်း၁၀၀ကျော်ရှိနေပါပြီ။ အသေးစာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ၊ ဘလော့ဂ်တွေ၊ စတာတွေကြောင့် ဒီလောက်မြန်မြန်တိုးပွားလာတာပါတဲ့။ တန်ဖိုးနည်း Domain name company များကြောင့်လည်းပါတယ်ပေါ့ဗျာ။ လွန်ခဲ့တဲ့တစ်လတာအတွင်းကလေးမှာတင် ၃.၅သန်းတိုးပွားလာတာပါ။
Posted by ဒီးဒုတ် at 11/06/2006 12:31:00 AM0comments
ဒီနေ့တီဗွီမှာသတင်းကြည့်နေရင်း ကြားဖြတ်သတင်းဝင်လာတာက “ဆက်ဒမ်ကို ကြိုးမိန့်ချလိုက်ပြီ” တဲ့။ (သွေးရူးသွေးတမ်းပုံစံမျိုးနဲ့ ဘုရားကိုတိုင်တည်နေသလိုမျိုး အော်ဟစ်နေတဲ့ ဆက်ဒမ်ကိုမြင်တွေ့ရတော့)စိတ်ထဲမကောင်းဖြစ်နေမိပါတယ်။ တချိန်က ဘုန်းမီးနေလတောက်လှပါတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထင်နေသူတစ်ယောက်ရဲ့ ကျဆုံးချိန်ဟာ ဒီလောက်ထိ ဆိုးရွားလှပါတယ်။ ကြိုးမိန့်သေဒဏ်ဆိုတာ အဆိုးဆုံး ပြစ်ဒဏ်ပါ။ အီရတ်နိုင်ငံတဝှမ်းက ရုပ်မြင်သံကြားစောင့်ကြည့်နေတဲ့ပြည်သူအများစုက ဒီသတင်းကိုလည်းကြားရော…ဘာပြောကောင်းမလဲ…လက်ခုပ်လက်ဝါးတီး အော်ဟစ်ကခုန်ကြပါရောလား။ (တချိန်က စုဝေးပွဲတွေမှာလည်း…ဆက်ဒမ်ရှေ့ကလူစုလူဝေးကြီးက ဒီလိုဘဲ လက်ခုပ်လက်ဝါးတီးကြိုဆိုခဲ့ပုံကို လည်းပြန်ပြပါသေးတယ်။… တိုင်းပြည်ကိုအာဏာနဲ့မတရားဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်သူရဲ့ရလာဒ်ကို ထင်ဟပ်ပြချင်တဲ့သဘောနဲ့တူရဲ့..)။ ဘက္ကဒတ်မြို.သားတစ်ဦးက “ဒါ…သူနဲ့အထိုက်တန်ဆုံးပြစ်ဒဏ်ပေါ့” လို့ခပ်အေးအေးဘဲဆိုပါတယ်။
Posted by ဒီးဒုတ် at 11/05/2006 10:58:00 PM0comments
(Australian Asia Pacific Network TV News)
သာမန် Hoax သတင်းလောက်တော့မဟုတ်တန်ရာတော့ဘူးထင်ပါတယ်။
အသက်ကြီးတာနဲ့အမျှ စားစရာ ပင်လယ်ငါးရှားပါးလာတော့မှာဗျ။
အခြားအကောင်ဗလောင်တွေလည်း ထိုနည်း၎င်းမဖြစ်လာဘူးလို့ မပြောနိုင်ဘူး။
အဓိက လူတွေအတွက် အာဟာရ ဖြစ်တဲ့ ရေငံငါးမျိုးတွေ ပျောက်ကွယ်သွားမယ့်ကိစ္စ။
UK မှာရှိတဲ့ Plymouthအဏ္ဏဝါဓါတ်ခွဲဌာနက သုတေသီ
“နီကိုလာဘူးမွန့်-Nicola Beaumont” ပြောတာက....
“ဒါဟာ နောင်ဘာဖြစ်လာမယ်ဆိုတာ ကြိုဟောကိန်းထုတ်တာမဟုတ်ဘူး...
ဒါပေမယ့်...ဒီကိစ္စကို မယုံကြည်သူတွေကလည်း အများအပြားပါဘဲ။
Posted by ဒီးဒုတ် at 11/04/2006 12:19:00 AM 1 comments
ဘီဘီစီမှာဒီလို ရင်တုန်ပန်းတုန်ကိစ္စတွေ တွေ့ဘဲတွေ့နိုင်လွန်းတယ်။
(သူတို့ဘဲ ကြိုသိနိုင်လွန်းလိုက်ကြတာ...ဦးကဝိတို့ရယ်။ ဒို့ရွာမှာတော့
စက်ကိရိယာတွေနဲ့ ဖမ်းတာတောင် မှန်းချက်နဲ့ နှမ်းထွက်မကိုက်ဘဲ
တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ဆက်စပ်နေတဲ့သမုဒ္ဒရာမျိုးစိတ်ကွဲတွေကို မပျောက်ပျက်
နောင်လာနောင်သားတွေ Seafood စားနိုင်အောင် ခုထဲက ဘာတွေလုပ်ကြမလဲ။
*ဒီမှာသွားဖတ်*ပါ။ အခုတော့ တော်တော်စိတ်ညစ်သွားပြီဗျို့။
Posted by ဒီးဒုတ် at 11/03/2006 04:09:00 PM2comments
ဘလော့ဂါဆိုဒ်ကလည်း ခုတလော တက်လိုက်ကျလိုက်…ဒီတစ်ခေါက်တော့
ပုံတွေတင်မှာဆိုတော့ ဆိုဒ်လေးမှာစိုးလို့ ပြီးခဲ့တဲ့ပို့စ် (ဗွီဒီယို) ကိုပြန်ဖယ်လိုက်တယ်။ အခုဟာက ယောက်ျားလေးတွေသတိထားစရာပါခင်ဗျား။ ချောချောလှလှ လေးတွေတွေ့တိုင်းမခံစားမိခင် အရင်လေ့လာ…နော။ နည်းပညာတိုးတက်တဲ့ခေတ်ကြီးပေကိုး။
Posted by ဒီးဒုတ် at 11/03/2006 12:56:00 PM4comments